तपाईको रेट कति हो?, एक रात विताको कति लिनु हुन्छ भन्दा झसङ्ग हुन्थे: नायिका सुरक्षा - Hamro Filmy News
नायिका सुरक्षा पन्त नेपाली फिल्मी इन्डस्ट्रीमा अब्बल नायिकाको रुपमा चिनिन्छन् । बुटवलमा जन्मिएका सुरक्षा इन्जिनियरिङकी विद्यार्थी हुँदै अभिनय क्षेत्रमा आएकी हुन् । चलचित्र ‘अझै पनि’ बाट नेपाली फिल्म इनडस्ट्रीमा प्रवेश गरेकी उनले पछिल्लो समय थुप्रै चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
नेपालमा पछिल्लो महिला हिंसाका घट्नाहरु बाक्लो रुपमा सार्वजनिक हुन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा आधारित रहेर गरिएको कार्यक्रम ‘ऐना’मा नायिका सुरक्षा पन्तले आफुलाई पनि हिंसा हुने गरेको बताएकी छन् । कार्यक्रममा उनले आफुलाई यस चलचित्रमा क्षेत्रमा शुरुमा प्रवेश गर्दै आफुले हिंसा भोग्नु परेको बताईन् । उनले आफुलाई अपरिचित व्यक्तिहरुले फोन गरेर ‘तिम्रो रेट कति हो रु’ भनेर सोँध्ने गरेको बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘सुरक्षा जि म फलानो… तपाईको रेट चाहिँ कति हो?’ भनेर सोध्नु हुने, ‘तपाई एक रात विताको कति लिनु हुन्छ?” भन्ने कुराहरु गर्ने! म त झसँग हुन्थे!, ‘मैले कस्तो कुराहरु गर्नु हुँदैछ भन्दा, यो त नर्मल हो नि! भन्ने गर्थे’ मलाई त्यो बेला त यो पेसा यसरी नै चलिराको छ भन्ने खालका प्रश्नहरु उठ्थ्यो !’
कार्यक्रम ऐनाले ‘सार्वजनिक स्थलमा यौन दुव्र्यवहार किन र कहिले सम्म?’ भन्ने शिर्षकमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यस कार्यक्रममा नायिक पन्तसहित धेरै महिलाहरुले आफुले भोगेका यौन दुव्र्यवहारका समस्याहरु सुनाएका थिए ।